ल्यान्डिङमा 747-8 स्वत: स्पोइलरहरू
प्रश्न ल्यान्डिङमा 747-8 स्वत: स्पोइलरहरू
7 महिना2दिन पहिले -7महिना 1 दिन अघि #1312 by mikeyjames
अन्तिम सम्पादन:7महिना 1 दिन पहिले mikeyjames.
6 महिना4दिन पहिले #1349 by Gh0stRider203
तपाईलाई सामान्यतया ल्यान्डिंगमा के ठाडो गति के हो? कुनै पनि विचार? मलाई कहिलेकाहिँ थाहा छैन कि यो तैनात छैन यदि यो ल्यान्डिंग नरम छ ... वा त्यसैले मैले भनें। मैले योसँग कुनै मुद्दा कहिल्यै गरेन।